Penguin 2.0: Hevitra efatra tokony ho fantatrao | Martech Zone
Tonga izany. Miaraka amina bilaogy iray, ny famoahana ny algorithm, ary ny famoahana ora roa, dia navoaka ny Penguin 2.0. Tsy hitovy mihitsy ny Internet. Matt Cutts dia namoaka lahatsoratra fohy momba ny lohahevitra tamin'ny 22 Mey 2013. Ireto misy hevi-dehibe efatra tokony ho fantatrao momba ny Penguin 2.0
1. Penguin 2.0 nisy fiatraikany 2.3% amin'ny fangatahana anglisy-Etazonia rehetra.
Fandrao misy feo 2.3% ho anao toy ny isa kely, dia tadidio fa manodidina ny 5 lavitrisa ny karoka Google isan'andro. 2.3% amin'ny 5 miliara no betsaka. Ny tranokala varotra orinasa tokana dia mety miankina amin'ny fangatahana 250 isan-karazany amin'ny fivezivezena sy fidiram-bola be. Ny fiantraikany dia lehibe kokoa noho ny isa desimaly kely mety hanome soso-kevitra.
Raha ampitahaina, ny Penguin 1.0 dia nisy fiatraikany 3.1% amin'ireo tranonkala rehetra. Tadidinao ny vokadratsin'ny vokatr'izany?
2. Ny fangatahana amin'ny fiteny hafa koa dia voan'ny Penguin 2.0
Na dia atao amin'ny teny Anglisy aza ny ankamaroan'ny fangatahana Google dia an-jatony tapitrisa ny fangatahana atao amin'ny fiteny hafa. Ny fiantraikan'ny algorithmika nataon'i Google dia miitatra amin'ireo fiteny hafa ireo, mametraka kibosh lehibe kokoa amin'ny webspam amin'ny sehatra manerantany. Ireo fiteny izay malazo ny isanjaton'ny webspam ambony kokoa dia hisy fiantraikany bebe kokoa amin'izany.
3. Niova be ny algorithm.
Zava-dehibe ny hitadidy fa Google dia manana tanteraka nanova ny algorithm tao amin'ny Penguin 2.0. Tsy famelomana data fotsiny izany, na dia toa izany aza ny teti-pitenenana "2.0". Ny algorithm vaovao dia midika fa maro amin'ireo tetika spammy taloha no tsy handeha intsony.
Mazava ho azy fa tsy vao izao no nifankahalalanay tamin'i Penguin. Ity misy tantaran'ny bala ao Penguin.
24 aprily 2013: Penguin 1. Ny fanavaozana Penguin voalohany dia tonga tamin'ny 24 aprily 2012, ary nisy fiantraikany mihoatra ny 3% amin'ny fangatahana.
26 Mey 2013: Fanavaozana an'i Penguin. Iray volana taty aoriana dia namelombelona ny algorithm i Google, izay nisy fiatraikany amin'ny ampahany amin'ny fangatahana, manodidina ny 01%
5 Oktobra 2013: Fanavaozana an'i Penguin. Tamin'ny faramparan'ny 2012 dia nanavao ny angon-drakitra indray i Google. Tamin'ity indray mitoraka ity dia manodidina ny 0.3% ny fangatahana voakasik'izany.
22 Mey 2013: namoaka ny Penguin 2.0, misy fiatraikany amin'ny 2.3% amin'ny fangatahana rehetra.
Araka ny fanazavan'i Cutts momba ny 2.0, “taranaka algorithma vaovao io. Ny fiverimberenan'i Penguin teo aloha dia ny pejy fandraisana tranokala fotsiny no jerena. Ny taranaka penguin vaovao dia lasa lalindalina kokoa ary misy fiatraikany lehibe amin'ny faritra kely sasany. ”
Ireo webmaster voakasik'i Penguin dia hahatsapa ho mafy kokoa ny fiatraikany, ary mety ho ela kokoa ihany koa vao ho sitrana. Ity algorithm ity dia midina lalina, midika izany fa ny vokany dia mihodina hatrany amin'ny pejy rehetra amin'ny fanitsakitsahana mety.
4. Mbola hisy Penguin fanampiny.
Mbola tsy naheno ny farany an'i Penguin izahay. Manantena izahay fa hisy fanitsiana fanampiny momba ilay algorithm, toa ny nataon'i Google tamin'ny fanovana algorithm rehetra nataona izay. Ny algorithm dia mivoatra miaraka amin'ny tontolon'ny tranonkala miovaova hatrany.
Matt Cutts dia nanonona hoe: "Afaka manamboatra ny fiantraikany isika saingy te hanomboka amin'ny ambaratonga iray ary avy eo afaka manova ny zavatra mety." Ny mpaneho hevitra iray tao amin'ny bilaoginy dia nanontany manokana momba ny hoe «handà ny vidiny ambony ho an'ireo mpandefa rohy» i Google, ary namaly Andriamatoa Cutts, "ho avy io aorian'izay."
Izany dia manondro ny fanamafisana mitombo ary, angamba, ho an'ny fanalefahana sasany, ny fiantraikan'ny Penguin 2.0 mandritra ny volana vitsivitsy.
Betsaka ny webmaster sy SEOs no sosotra amin'ny fiatraikany ratsy amin'ny fiovan'ny algorithm amin'ny tranokala salama. Ny webmaster sasany dia mijanona ao anaty niches izay milomano amin'ny webspam. Nandany am-bolana na an-taonany maro izy ireo tamin'ny famoronana atiny matanjaka, fananganana rohy manam-pahefana ambony, ary fananganana tranokala ara-dalàna. Na izany aza, amin'ny famoahana algorithm vaovao dia miaina sazy ihany koa izy ireo. Nisy webmaster biz kely iray nitaraina hoe: “Hadalana tamiko ve ny nanangona vola tamin'ny taona lasa hananganana tranokala fahefana?”
Ho fampiononana, dia nanoratra i Cutts fa, "Misy zavatra ho avy ato ho ato amin'ity fahavaratra ity izay tokony hanampy amin'ny karazana tranokala lazainao, ka heveriko fa nanao safidy tsara ianao hiasa amin'ny fananganana fahefana."
Rehefa mandeha ny fotoana, ny algorithm dia tratrany ihany amin'ny webspam. Mety mbola misy fomba sasany hampialaina ny rafitra, saingy nijanona ny lalao rehefa nandehandeha teny amin'ny kianja filalaovana i Panda na i Penguin. Ny tsara indrindra hatrany mankato ny fitsipi-dalao.
Voan'ny Penguin 2.0 ve ianao?
Raha manontany tena ianao na Penguin 2.0 nisy fiantraikany taminao, azonao atao ny manao ny fandinihanao manokana.
Zahao ny laharam-pahamehanao teny lakile. Raha nihena be izy ireo nanomboka tamin'ny 22 Mey, dia misy ny voka-dratsin'izany.
Fakafakao ireo pejy izay nahazo ny fifantohana indrindra amin'ny fananganana rohy, ohatra ny pejin-tranonao, pejy fanovana, pejy sokajy na pejy fitodiana. Raha nidina mafy ny fifamoivoizana dia mariky ny fiatraikany Penguin 2.0 io.
Mitadiava fiovan'ny laharam-pahamehana misy ny vondrona teny lakile fa tsy teny lakile manokana fotsiny. Ohatra, raha te-hilahatra amin'ny "windows vps" ianao, toy izay hamakafaka ny teny lakile toy ny "windows vps hosting," "mahazo windows vps hosting," ary teny hafa mitovitovy aminy.
Araho lalindalina sy malalaka ny fivezivezena biolojika anao Google Analytics ny namanao rehefa mandalina ny tranokalanao ianao ary avy eo miverina amin'ny vokany. Diniho manokana ny isan-jaton'ny fifamoivoizana biolojika, ary ataovy izany manerana ireo pejin-tranonkala lehibe rehetra. Ohatra, fantaro izay pejy nanana fifamoivoizana ara-organika ambony indrindra nandritra ny volana 21 aprily-21 may. Avy eo, tadiavo raha nilentika nanomboka tamin'ny 22 Mey ireo isa ireo.
Ny fanontaniana faratampony dia tsy hoe "voakasik'izany aho," fa "inona no ataoko ankehitriny fa voakasik'izany aho?"
Raha tratran'ny Penguin 2.0 ianao dia izao no tokony hataonao:
Ahoana ny fomba famerenana amin'ny laoniny Penguin 2.0
Dingana 1. Mitonia. Hilamina izany.
Dingana 2. Fantaro ary esory ny pejy spammy na ambany kalitao amin'ny tranokalanao. Isaky ny pejy rehetra amin'ny tranokalanao dia manontania tena raha tena manome lanja ho an'ny mpampiasa izy io na raha toa ka fodderan'ny motera fikarohana no misy azy. Raha ny tena valiny raha ity farany, dia tokony hampitomboinao na esory tanteraka amin'ny tranokalanao izany.
dingana 3. Fantaro ary esory ny rohy miditra spam. Raha te hahalala izay rohy mety hampihena ny laharanao ary hahatonga anao ho voan'ny Penguin 2.0, mila manao an'io ianao fanaraha-maso momba ny rohy miditra (na manana matihanina manao izany ho anao). Rehefa avy hitanao hoe rohy iza no tokony hesorina, manandrana manala azy ireo amin'ny alàlan'ny fandefasana mailaka amin'ireo webmaster ary mangataha azy ireo am-panajana mba hanala ilay rohy mankamin'ny tranonkalanao. Rehefa avy nahavita ny fangatahana fanesorana anao ianao dia aza hadino ny tsy hanaiky azy ireo koa, amin'ny fampiasana Fitaovana Disavow an'ny Google.
Dingana 4. Midira amin'ny fanentanana fananganana rohy miditra vaovao. Mila manaporofo amin'ny Google ianao fa ny tranokalanao dia mendrika laharana ambony amin'ny valin'ny fikarohana. Mba hanaovana izany dia mila vato azo atokisana azo itokisana ianao amin'ny antoko fahatelo azo antoka. Ireo vato ireo dia tonga amin'ny endrika rohy miditra avy amin'ireo mpanonta hafa izay atokisan'i Google. Fantaro hoe iza avy ireo mpanonta Google laharana voalohany amin'ny valin'ny fikarohana ho an'ny teny lakilenanao voalohany ary mifandraisa amin'izy ireo momba ny fanaovana ny bilaogy vahiny.
Paikady SEO matanjaka mandroso dia handà ny hanaiky na hanao teknikan'ny satroka mainty. Hanaiky sy hampifangaro ny Andry 3 an'ny SEO amin'ny fomba izay manome lanja ny mpampiasa ary mametraka fifampitokisana, fahatokisana ary fahefana. Mifantoha amin'ny atiny matanjaka, ary aza miasa afa-tsy amin'ireo masoivohon'ny SEO fanta-daza miaraka amin'ny firaketana an-tsoratra ny fanampiana ireo tranonkala hahomby.
Tags: Google +vorondranopenguin 2.0fikarohana OptimizationSEO
Kitapo voalohany, Touch farany, Multi-Touch